မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Messenger app ရဲ့ update အသစ် – AsiaApps
May 2, 2018 May 11, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Messenger app ရဲ့ update အသစ်
Facebook အနေနဲ့ Messenger app အတွက် update အသစ်တစ်ခု ထုတ်လုပ်တော့မယ့်အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်အနည်းငယ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ F8 Facebook Developer Conference မှာ Facebook ရဲ့ CEO Mark Zuckerberg ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Update မှာဆိုရင် Messenger app ရဲ့ Interface တစ်ခုလုံးကို ဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်သလို အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အသုံးပြုရ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်နေအောင် လုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Interface အသစ်ကြီးရဲ့ ဒီဇိုင်းအနေအထားကတော့ လက်ရှိ Version နဲ့အခြေခံလောက်သာ တူညီပြီး Tab နေရာအနေအထားတွေက တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ လက်ရှိ Version မှာပါဝင်တဲ့ Tab အချို့ကိုလည်း ဖြုတ်ထားပါတယ်။ အရိုးအရှင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်လို့ Messy ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဟာတွေ တော်တော်များများကို ဖြုတ်ထားတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် update အသစ်မှာ Dark Theme အသစ်ပါ ပါဝင်ဉီးမှာဖြစ်တယ်လို့လဲ သတင်းတွေထွက်ရှိနေပါတယ်။
Messenger update အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook CEO Mark Zuckerberg က
“Message ပို့တဲ့အချိန်မှာ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးပို့ချင်ကြတာအားလုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီး Messenger ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်”
See also – Facebook က Dating feature အသစ် ပြုလုပ်တော့မယ်
Interface တစ်ခုလုံးကို ဒီဇိုင်းပြန်လည်ရေးဆွဲထားတဲ့ Messenger app ကိုတော့ မကြာတော့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Messenger update အသစ်မှာ ဘဝင်သိပ်မကျတာတစ်ခုက Chat Head လေးတွေကို တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ မစဉ်းစားတာပါပဲ။ စကားပြောတဲ့ လူများလေလေ Chat Head ကများလာမှာကြောင့် သာမာန် FA တွေအတွက်က ကိစ္စသိပ်မရှိပေမယ့် ?) Social ကောင်းလှတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ အနည်းငယ် Messy ဖြစ်သလိုခံစားရမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါကတော့ Messenger နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မြင်မိတဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုပါ။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရော ဘယ်လိုမြင်မိလဲဗျ။ Interface ဒီဇိုင်းအသစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Messenger ကိုရောကြိုက်နှစ်သက်လား ? စိတ်ဝင်စားရင် ကွန်းမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။